अध्यन भन्छ: छिटो रिसाउने मानिस छिट्टै मर्छ, खुशी हुन के गर्ने ? – Hamrosandesh.com
अध्यन भन्छ: छिटो रिसाउने मानिस छिट्टै मर्छ, खुशी हुन के गर्ने ?
रिस आफैंमा एक खराब कुरा हो । तर, कतिपय मानिसहरु सानो सानो कुरामा पनि अचानक रिसाउँने स्वभावका हुन्छन् । नेपालीमा एउटा भनाई छ, ‘रिस खा आफु बुद्दी खा अरु’ भन्ने चलन अहिले पनि चलनमा नै छ । रि स उठ्ने बानि स्वास्थ्यको लागि नराम्रो पक्ष हो । हाम्रो दैनिक जिवनका स(साना बानीहरु पनि मृ त्युको कारण बन्न सक्छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले धेरै रिस उठ्ने मानिसहरुको मृ त्यु छिटो हुने पुष्टि गरेको छ ।
आइवा स्टेट विश्वविद्यालयमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार नरि साउने मानिसको तुलनामा धेरै रि स उठ्ने मानिसको अकालमा मृ त्युको खतरा डेढ गुणा बढी हुने गरेको छ । रि सका कारणले गर्दा मानिसको शरीरमा विभिन्न खाले ख तरनाक परिवर्तन आउँछन , जसमा त नावदेखि लिएर मनोरोग लगायतका हुन्छन् । रि साहा मानिसको शरिरमा एड्रेनलाइन हर्मोन तिव्र गतिमा बग्छ । तनाव तथा रिसका समयमा यो हर्मोन पटक पटक रगतमा बग्नाले डिएनएमा असर पर्छ । यसले प्राणघातक रोग तथा मृ त्यु समेत हुन सक्छ । धेरै रि स गर्ने मानिसमा निद्रा कम लाग्ने तथा दिमागी असर पनि पुग्न सक्छ ।
धेरै रि साहा मानिसमा टाउको दु ख्ने समस्या हुन्छ । किनकी रि सले शरिरमा स्ट्रेस हर्मोनका साथसाथै एड्रेनलाइन र टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्सर्जन पनि बढ्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । बढि रि साहा मानिसमा फोक्सोमा समेत्त स मस्या हुने अ नुसन्धानले पत्ता लगाएको छ ।